Kismaayo News » FIIDSOOH: Cagteey Malabeey meel i gee
FIIDSOOH: Cagteey Malabeey meel i gee
Kn: Xalay Alshabaab waxa ay baneeyeen magaalada Kismaayo, markii Afhayeenka Alshabaab Sheekh Cali Dheere la weeydiiyey waxa dhacayna waxa uu ku jawaabay “Maamulka oo kaliya ayaa magaalada ka baxay, laakiin ciidankeena waa joogaan magaalada“.
Muddo badan waxaa laga hadlay muhiimadda ay shabaabka u leedahay magaalada Kismaayo iyo sida ay oga go’antahay in ay ku dagaalamaan, sida iyaguba in badan ay sheegeen.
Laakiin Shabaabka waa xajisan waayeen Kismaayo, waxayna ku qasbanaadeen in ay magaalada ka baxaan habeen madoow xitaa ka hor intii aanan la’is faro saarin, sababtoo ah “Nin weyn wadkiisa waa yaqaanaa“.
Cali Dheere oo isaga laftiisa aanan la ogeyn halka uu joogo, aanan la arag meel uu dagaal oga qeybgalay ayaa hadaladiisa in maamulkii uu Kismaayo ka baxay ayaa waxa ay ka turjumeysaa sida hogaanka Shabaabka aysan diyaar ugu ahayn in ay u dhintaan qadiyadda ay ku halaageen kumanaan dhalinyaro ah oo aan badankood meher qabiltu oran.
Difaacista Kismaayo waxaa Shabaabka oga muhiimsanaadey la fakashada hogaankooda oo la sheegey in ay Kismaayo ku sugnaayeen.
Golayaasha lagu bulsheeyo waxaa tiiley dood adag oo su’aal ka keeneysa sababta Shabaabka ay u go’aansadeen in ay Kismaayo ku dagaalamaan oo aysan ugu dagaalamin magaalooyin badan oo la muhiimad ahaa Kismaayo.
Waxaa lasoo tabiyey in dad kasoo jeeda magaalooyinka kale ee aanan lagu dagaalamin oo ku jirey hogaanka Alshabaab ay sabab u ahaayeen in aanan lagu dul dagaalamin shacabka, halka Kismaayo ay Shabaabka u ahayd meel ay horey u qaniimeysteen, dadka degana aysan dan ka lahayn.
Waxaana xusid mudan in Shabaabka ay ka carareen mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu sareeya ee laakiin Jubbooyinka kasoo jeeda oo xanuunsan, saruurna saaran.
Go’aankii ahaa in lagu dagaalamo waxa uu is badalay daqiiqadii ugu dambeeysay markii Shabaabka ay u xaqiiqoowdey in qaar badan oo shacabka Kismaayo ah ay diyaar u ahaayeen in Shabaabka ay qoryaha kula jeedsadaan inka badan intii ay ciidamada huwanta qoryaha kala hortagi lahaayeen.
Dadka waxa ay iska dhago mariyeen baaqyaddii shabaabka ee ahaa in ay magaalada difaacdaan, ugu yaraana hal oday oo magaalada caan ka ah ayaa la sheegey in madaxda Alshabaab uu meel masaajid ah dhexdiisa oga sheegey in aysan shacabku dagaalami doonin, haddii ay tahay in ay dagaalamaana la keeno shacabka magaalooyinka kale ee ay Shabaabku ka taliyaan si ay Kismaayo u difaacaan.
Lama oga kuwa ay yihiin hogaamiyeyaasha Alshabaab ee Kismaayo laga qixiyey, tiradooda iyo xilalkooda, laakiin afhayeen Kenya u hadlay waxa uu sheegey in ay dileen labbo ka mid ah hogaamiyeyaasha Alshabaab oo uu ka midyahay Sheekh Xassan Yacquub oo ahaa gudoomiyihii Kismaayo.
Inkasta oo ay baxsadeen madaxdii iyo maamulkii Shabaabka, hadana waxaa magaalada ku sugan canaasiir tiro badan oo dhar caadi ah xiran, kuwaasoo hubkooda xasaystey, ishana ku haya xaalada, waxkastana laga filan karo, lagana yaabo inay maalinkii eheladooda la joogaan habeenkiina ugaartaan.
Waxaa iyagana jira maleeshiyaad qaab beeleed loo abaabuley kuwaasoo diyaar u ah in ay arrinta oo dhan u rogaan beelo isku heysta maamulka Kismaayo, wararka qaarkoodna waxaba ay ka hadlayaan in saacadaha soo socdo laga yaabo in ay ku dhawaaqaan magac ama urur ay ku gabadaan.
Ciidamada huwanta loo bixiyey ee ka kooban AMISOM, ciidamada qaranka iyo kuwa Raaskaanbooni ayaa iyaga wali ku dhiiran la’ in ay magaalada galaan, waxa ay sameynayaan xiriiro kala duwan oo dadka gudaha ku jira, iyagoo dad badana magaalada galiyey si ay xog oga keenaan, waxaa aad loo maleeynayaa in ay jiraan shirqoolo maleegan oo Shabaabku qooleen. Warar aan heleyno waxa ay sheegayaan in ay u badantahay in marka hore ay magaalada galaan ciidamada Soomaalida ah ka hor inta aysan AMISOM galin.
Dadka wali taxadarka ku jira oo aanan wali isku aaminin in ay Shabaabku baxeen ayaa waxaa ka mid ah shacabka magaalada oo marqaati ka noqdey nin rayid ah oo cod dheer ugu dabaaldegey bixitaanka Shabaabka, oo inta luuq looga soo baxay 10 xabbo lagu dhiftey, falkaasina ay geysteen labbo nin oo wajiga duuban.
Arrin murugo leh oo qasbeysa in ciidamada durba galaan magaalada waxa ay tahay boobka iyo amaandarada baahsan ee magaalada ka jirta, iyada oo saacadihii ugu dambeeyey lagu diley 5 qof oo rayid ah.
Waxaa jirta maahmaah dhahaysa “Abaar waa ay haraysaa, iinta ay reebeyso ayaa ka badan“, Shabaabka waa ay baxeen, laakiin dhibaatada ay ka tageen ayaa ah mid waqti dheer ku qaadata xalinteeda maamul kasta oo magaalada ka taliya.
Waxaa jirta maahmaah kale oo oranaysa “Ninkii soo joog laga kari waayo, soo jiifso ayaa laga helaa“, hogaamiyeyaashii Shabaabka ee bulshada iyo odayaasha u qabsoomi waayay hadda waxa ay taaganyihiin “Cagteey Malabeey Meel i gee“, waxa huranna waa cunista waraabaha.